Tag: digniinta qashinka | Martech Zone
Tag: qashin qubka
Monday, August 30, 2010 Jimco, Juun 19, 2015 Douglas Karr
Garyaqaanka David Castor, oo ah qareen ku takhasusay bilowga iyo ganacsiyada SaaS, ayaa iimayl ii soo diray dhammaadka wiigga iyada oo wararka sheegaya in FTC ay la degtay dhibbigeedii ugu horreeyay ee sharciyada cusub ee shaacinta. Iyada oo qayb ka ah dejinta la soo jeediyay (PDF), shirkadda PR Reverb Communications iyo milkiilaha Tracie Snitker waa inay ka saaraan wixii dib u eegis ah ee iTunes ee ay qoreen shaqaalaha Reverb ee iska dhigaya macaamiisha caadiga ah ee ku guuldareystay inay soo bandhigaan xiriirka ka dhexeeya Reverb iyo ciyaartiisa
Internetku wuxuu ku sii fiicnaadaa bilaa Flash
Jimco, Juun 11, 2010 Tuesday, May 3, 2016 Douglas Karr
Steve Jobs wuu saxsanaa. Qofka ugu horeeya ee igula taliyay inaan helo Flash block wuxuu ahaa Blake Matheny. Blake waa mid ka mid ah injineerada ugu fiican ee aan waligey ku raaxeysto inaan la shaqeeyo - oo waxaan kala soo shaqeeyay Compendium iyo ChaCha labadaba. Waxaad u maleyn laheyd inaan dhageysan lahaa nin badalay dhamaan kaabayaasha dhaqaalaha iyo madasha ugu yaraan laba shirkadood oo tiknoolajiyado kala duwan ah. Ma dhagaysan isaga. Aniga
Waxaan Qareennay Garyaqaan Maanta
Jimcaha, Sebtember 5, 2008 Talaado, Juun 25, 2019 Douglas Karr
Ma ahan wax xun. Toddobaad kasta, in ka badan sannad, waxaan xasuusin ka haystaa 43 waxyaalood si aan u bilaabo Ganacsi guuleysta. Taasi waa amar dheer! Bilaabida ganacsi waa hal shay, ku guuleysiga waa wax kale. Waxoogaa guul ah ayaan kuheystey baloogga waxaanan sii wadaa inaan helo hawlgallo dheeri ah blogga dartiis. Toddobaadkii hore, waxaan xiray 2 qandaraasyo muhiim ah, labadaba muddo dheer oo leh tan